DAAWO SAWIRRO:-Ciidankii ugu badnaa oo lagu qabtay dagaalkii Balad-xaawo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wararkii ugu danbeeyay ee Degmada Beledxaawo ayaa sheegaya in ciidamo badan oo ka mida kuwii taabacsanaa Wasiirka Amniga Jubbaland lagu qabtay, ayna maxaabiis ahaan isu dhiibeen.
Ciidamadan oo ka badań 100 askari ayaa noqonaya kuwii ugu badnaa ee mar qura is dhiiba markii ay dagaal kusoo qaadeen degmada Beledxaawo, waxaana wararku sheegayaan inuu la dejiyey goob gaara oo ay gacanta ku hayaan ciidamada dowladda.
Dhinaca kale dagaalkii ka socday gudaha degmada Beledxaawo ayaa istaagay, inkastoo ay ciidamo ka tirsan Jubbaland ay weli ku sugan yihiin gudaha magaalada.
Wasiirka Warfaafinta Soomaaliya Cusmaan Dubbe oo shir jaraa’id ku qabtay Muqdisho ayaa sheegay in ciidankii soo weeraray Beledxaawo ay ka qabteen maxaabiis gaaraya 100 askari, wuxuuna ku eedeeyay ciidamada dowladda Kenya inay qeyb ka ahaayeen dagaalka.